GvSIG 2, aragtiyo hore - Geofumadas
GvSIG 2, riyooyin hore
Nofeembar, 2008 GvSIG
Koorsada waxaan go'aansanay inaanu tijaabino nooca cusub ee GvSIG, inkasta oo aan weli lagu dhawaaqin xasillooni, waxaa suurtogal ah in la soo dejiyo dhismooyin kala duwan si loo arko waxa ruxruxa.
Waxaan soo dejiyey 1214, iyo inkasta oo aan filayay in aan tijaabiyo shaqooyinka calaamadaha dhibcaha iyo khadadka sida Waxaan dhahay xurxo, sida muuqata waa inaan isku dayaa 1218. Waa kuwan aragtiyadii hore:
Dhab ahaantii, waxay ahayd wakhtigii lagu hagaajin lahaa astaantaas oo ahayd qoryoole.
Hadda waxaa suurtagal ah in la muujiyo ama la qariyo qalabka wax lagu qoro, taas oo u muuqata in halkii laga sii wadi lahaa kordhinta dabacsanaanta ay sidoo kale leeyihiin koox kooxeed. Kuwani waxaa loo arki karaa doorashooyin marka la rakibay.
Ficilada qaarkood ayaa sidoo kale lagu soo ururiyey liiska ugu sareeya ee loo isticmaali karo lakabyo gaar ah.
(Caawin) Inkastoo aysan u muuqan in ay tahay shumis, caawimadu waxay leedahay muuqaalkeeduna waa la heli karaa iyadoo aan la eegin buugga pdf
(KML) Hadda marka lakaliyo lakabka, marka lagu daro gml, shp, dwg, dgn iyo raajka kale ee loading kml ayaa lagu daray, inkasta oo aanan arkayn in ay suurtagal tahay in la dhoofiyo qaabkan.
(Dhismo) Qaar ka mid ah amarrada dhismaha ee cusub ayaa lagu daray, sida kala soocidda iyo qiyaasta. Sidoo kale waxaa suurtagal ah in la arko amarrada aan kor u qaadeyno sida firdhinta, ku biirista, jebinta, fidinta iyo kuwa ku jira qaybtii hore haddii aadan u baahnayn inaad kordhisid oo aad ku dhaqaajiso ... ma ogaan kartid inay jiraan.
(Sensing Remote) Marka laga reebo hagaajinta adeegga lakabka raajada, dhowr farsamooyin ayaa loo sameeyay si ay ula shaqeeyaan sawirrada oo ay ka mid yihiin qoondaynta, xisaabinta qoryaha, qeexitaanka gobollada xiisaha iyo sawirada muuqaalka.
(Topology) Inkastoo kordhin waxa loo heli karaa oo keliya ma aha, waayo, version 2 aan la baaro oo ay runtii waa suurto gal ah si loogu badalo qaab ah shinka in topology a sax ah, sharciyada iyo tirada ugu yar ee qaladaad aqbalay.
Kaliya Ilaah waa og yahay, malaha maalmaha soo socda ee toddobaadka ayaa sheegaya in marka ay filayaan inay sii daayaan nambar deggan.
Post Previous«Previous Koorka Manifold GIS ee maalmaha 2
Post Next Bishii Noofambar ee tagay, kooban ee bishaNext »
2 Jawaab "GvSIG 2, riyooyin hore"
Diseembar, 2008 at
Anigu ma aan maqlin horumarin badan oo ku saabsan arrintaan, dhab ahaantii guysada ka soo jeeda Geomatic waa in ay ogaadaan in badan
Mario Martínez isagu wuxuu leeyahay:
Salaan dadka Cartesia, shaqada, marka lagu daro isticmaalka Arcgis (waxaan heysanaa liisamo aad u yar (waad qiyaasi doontaa waxa ay u qalmaan)), waxaan sidoo kale u adeegsannaa GVsig shaqooyinka yaryar. Su'aashaydu waa haddii aad taqaan waxa soo saarka garaafka nooca 2 uu leeyahay, maxaa yeelay in aan isticmaalo waxay leedahay awood, markay timaado soo bandhigida iyo gelinta qorshayaasha "qurxoon" aad bay u liitaa ...?